၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉) ရက်ရရှိသည့် ရန်ကုန် အလုပ်အကိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉) ရက်ရရှိသည့် ရန်ကုန် အလုပ်အကိုင်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉) ရက်ရရှိသည့် ရန်ကုန် အလုပ်အကိုင်
Posted by manawphyulay on Jul 9, 2011 in Business & Economics, Food, Drink & Recipes, Jobs & Careers | 19 comments
လိုအပ်လျှက်ရှိသော ၀န်ထမ်း	စားပွဲထိုး ကျား (၁) ဦး
စားပွဲထိုး မ (၁) ဦး
အလုပ်ချိန်	နံနက် (၀၈း၃၀) နာရီမှ ည (၁၁း၀၀)နာရီထိ
နံနက် (၀၈း၃၀) နာရီမှ နေ့လည် (၀၂း၃၀)နာရီထိ အလုပ်ချိန် တစ်ချိန်
(နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၁း၃၀)နာရီအတွင်း နေ့လည်စာကျွေး)
နေ့လည် (၀၂း၃၀)နာရီမှ (၀၆း၃၀)နာရီထိ အားလပ်ချိန်
ညနေ (၀၆း၃၀)နာရီမှ ည (၁၁း၀၀) နာရီထိ အလုပ်ချိန်တစ်ချိန်
လစာ	၄၀၀၀၀ိ/-မှ ၄၅၀၀၀ိ/-
(ကျပ်လေးသောင်းတိတိ) မှ (ကျပ်လေးသောင်းငါးထောင်)
အစမ်းခန့်ကာလ	(၁၅) ရက်
ယူနီဖောင်း	ယူနီဖေါင်း နှစ်စုံ ကို၂၅၀၀၀ိ/- (ကျပ်နှစ်သောင်းငါးထောင်တိတိ)
တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀ိ/- ကျပ်နှုန်းဖြင့် လစာမှဖြတ်မည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၉-၇၃၀၅၀၆၀၃ ကိုဆက်သွယ်ပါ။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ယခုအမြန်ဆက်သွယ်ပါ။
ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုအင်ဂျင်နီယာလဲဆိုတာရယ်၊ အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ မိမိအလုပ်ရှာလိုသော နယ်/မြို့၊ တစ်ခြား တတ်မြောက်တဲ့ ပညာရပ်များကို သိမှ ဆက်သွယ်ပေးအပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လိုင်စင်လဲရှိပါတယ်။
ကျောင်းဆင်းပြီး အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တယောက်ကို (civil နဲ့ electrical) အနိမ့်ဆုံးရာထူးက စ ခန့်တာ လစာက တသိန်း ရပါတယ်။ construction အဓိက ထားလုပ်တဲ့ company မျိုးမှာ စုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံများရင်တော့ များသလို ရာထူးကွာ၊ လစာကွာသွားမှာပါ။
ကွန်ပျူတာနဲ. ပတ်သတ်တဲ. အလုပ်လေးတွေကျတော. သူတစ်ယောက်ထဲ ဒိုင်လျှို သွားဗျူးနေတာ
ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၉ ရက် နေ့ အတွက် တော့ အလုပ် ချိန် ကုန်သွားလို့ ၊
၁၉ ရက် နေ့ အတွက် ကတော့ သူတို့ တတွေ နှစ်တိုင်း နဲ့ မတူပဲ အာဇာနည် ဗိမ္မာန်ကို ထူးထူး ခြား ပြင်နေတဲ့ အကြောင်း ကို ပို့ တွေ မှာ ဘယ်သူရေးမလဲ လို့ စောင့် နေပါတယ်။
အလုပ်ချိန် 10နာရှီခွဲ လုပ်ခ တစ်နေ့ 1500 အလွန်ဆုံး….။ ယူနီဖောင်းဖိုးက ပြန်ဖြတ်ဦးမယ်…။ နယ်မှာတောင် ကုန်စုံဆိုင်မှာ မနက်6း00နာရီ ကနေ ညနေ 5း00နာရီ နေ့စား 1500 ည ကိုရီးယားကားအမှီ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်..။
အဲဒါက ဘယ်မြို့နယ်မှာလဲ ဆိုတာလဲ ပြောဦးလေ….
ဪ မဟာရန်ကုန်ကြီးရဲ့အလုပ်အကိုင်ဆိုတော့ ကြီးကြီးမားမားမှတ်တယ် စားပွဲထိုးအလုပ်ခေါ်တာကိုး. . .လစာကလဲ သူများနိုင်ငံ စားပွဲထိုးရဲ့တစ်ရက်စာ သာသာပဲ ရှိပါကလား
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၁၀နှစ်လောက်က…ယူအက်စ်ကလူတွေက ရန်ကုန်က သက်ဆိုင်သူတယောက်ယောက်ကို..ပန်းလက်ဆောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ ဆားဗစ်.. ၀က်ဘ်ဆိုက်ကတဆင့်.. လုပ်ပေးဖူးတယ်…။
အင်း.. ရန်ကုန်ကလူကို… လစာ ၄၀၀၀၀ိ/-မှ ၄၅၀၀၀ိ/- ပဲပေးရမယ်ဆိုရင်.. အဲဒါမျိုး ဆားဗစ်ပေးတဲ့အလုပ်တွေပြန်လုပ်လို့တောင်ရတယ်..။
ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သဂျီးရယ် အချိန်ပိုင်းလေးတော့ လုပ်ချင်ပါတယ်။ တစ်ခါထဲ လျှောက်ပါတယ်နော်….
Job Title: Logistics & Information Technology Assistant
Job Location: based in Pauk
Closing date of application: 24 July 2011
Oxfam Office, no.(16), 1st Floor, West Shwe Gone Daing 4th Street,West Shwe Gone Daing Ward, Bahan Township, Yangon
Read more: Logistics & Information Technology Assistant – Oxfam – Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/profiles/blogs/logistics-amp-information#ixzz1RgFJktZh
Access English Manager
Pay band: G (min USD 981)
British Council, 78 Kanna Road, Yangon
Last Date: before 12:00 noon, 14th July 2011.
Read more: Vacancy at British Council Yangon – Access English Manager (min USD 981) – Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/profiles/blogs/vacancy-at-british-council-1#ixzz1RgINFefh
မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိအလုပ်အကိုင်တွေက ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲရှင်သန်နေကြတာပါ။ မနော စုဆောင်းပေးနိုင်တာကလည်း ဒါပါပဲ။ ကြိုက်တဲ့လူကတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကို မလုပ်လိုလို့ နိုင်ငံခြားထွက်သွားသူတွေလဲရှိပါတယ်။ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်သွားပြီး အဆင်ပြေသူတွေရှိနေသလို၊ ဘာမှ မပြင်ဆင်သွားပဲ လူ့ဘ၀ရဲ့ အနိမ့်ပါးဆုံးအလုပ်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေရသူတွေ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ တချို့က အေးဂျင့်ရဲ့လိမ်ညာခံရခြင်းနဲ့ အဆင်မပြေတဲသူတွေလည်း ကြုံကြတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ယုံကြည်မှုရှိနိုင်တဲ့သတင်းတွေကို တင်ပေးတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်စွမ်းအား၊ ဥာဏ်စွမ်းအားနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ ၀င်ငွေ တစ်ကျပ်ကို တန်ဖိုးထားရမယ်။ စစခြင်းတော့ ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှ အများကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာရင်၊ အရည်အသွေးရှိလာရင်၊ အလုပ်ကြိုးစားလာရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀ကိုရကြမှာပါ။ ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်နဲ့ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်လိုသူတွေကတော့ ဒီမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင်း လူတိုင်း လူတိုင်း Income ရှိနေဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ မနောလည်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိပေမယ့် လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် သတင်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် မှား၊ မှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိမယ့်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
http://www.ngoinmyanmar.org နဲ့ http://www.themimu.info ဆိုတဲ့ Website တွေရဲ့ Job section မှာတော့ အလုပ်ခေါ်စာတွေရှိပါတယ် စမ်းလုပ်ကြည့်ပါလား။ ပေးတဲ့လစာလေးတွေမဆိုးပါဘူး။ ၁၀၀ လောက်တော့ အောက်ထစ်ရပါတယ်။
ASP.net နဲ့ developer အလုပ်လေးများရှိရင် ပြောကြပါရှင့်
Yin Nyine Nway>> ပြည်တွင်းမှာလုပ်ချင်တာလား။ ပြည်ပမှာလုပ်ချင်တာလားမသိဘူးနော်။ ပြည်တွင်းဆိုရင်တော့ MICT Park ထဲမှာ ခေါ်တာတော့ ရှိပါတယ်။ စုံစမ်းပေးပါမယ်။